5 Inta badan Safarada Tareen dalkinii Italy | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > 5 Inta badan Safarada Tareen dalkinii Italy
sodcaalladoodii oo tareen ee Italy bixiyaan ma aha oo kaliya raaxo, laakiin qaar ka mid ah views cajiib ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan qaadashada tareenka ee Italy waa fursad ay ku eegno muuqaal qurux badan sida aad ka mid ka mid ah meel u safraan kale. Qaybo ka mid ah Italy, waxaa jira waddooyin tareen muuqaal dabiici ah in ka sii badan yihiin hababka kaliya ee gaadiidka. Kuwani tareenada muuqaal dabiici ah in aad ula dhaqmi doonaa si views xeebaha, muuqaal buurta riwaayado, harooyinka dhalaalayay iyo si ka badan. Halkan waxa ku jira 5 ugu Safarada tareen dalkinii Italy.
Ha noo furo liiska 5 ugu jireen sodcaalladoodii oo tareen dalkinii Italy la – Levanto ilaa La Spezia – Cinque Terre
waddooyinka tareenka in ay raacaan Xeebaha riwaayado Italy ayaa ka mid ah kuwa ugu xiiso leh waa. The Cinque Terre tareenka waxay u adeegtaa shanta tuulo ee Riviera ee Talyaanigu ku leeyahay gobolka si qaab layaableh leh. Is dejiso gadaasha daaqadaha dusha sare oo qoy buuro qurux badan, badda sumurud, canab ah bucolic, iyo beerihiinna saytuunka ah. Qaado tareenka u dhexeeya Levanto iyo La Spezia for a safarka picturesque kooban laakiin qurux badan. Marka aad gaarto caga, aad markaas ku qaataan kartaa maalin tug tuulada la yaab leh.
Qoraal ay wadaagaan Cinque Terre Italy (@cinqueterre_love)
Naples si Sorrento
Ka safro Naples ilaa Sorrento oo soo mari goobaha qadiimiga ah ee Herculaneum iyo Pompeii. Safarkan cajiibka ah wuxuu bixiyaa aragtiyo Mount Vesuvius iyo Bay ee Naples jidka. Tani tareen kortaan hubaal waa mid ka mid ah ugu jireen sodcaalladoodii oo tareen dalkinii Italy.
Rimini in Catania – oo ay la socdaan xeebta bari ee Italy ee
Ugu fiican si ay uga soo safraan Northern Italy in Southern Italy hoos waa Coast East tareen. line The waddaa isku midka ah in ay xeebaha ah oo dhan lix saacadood oo muuqaal cajiib ah. Ka bilow Rimini, Korka kursi horey loo soo jeediyo, oo waxay qaadan geeduhu kula for a safarka heer sare ah! En wadada si Catania, tareenka gudbo geedihii Asheeraah liin iyo qulqulka dhagax dab, la istaago at qaar ka mid ah saldhigyada xiiso safarka oo idil.
Messina in Tareenadu Catania
Syracuse in Tareenadu Catania
Taormina in Tareenadu Catania
Palermo si ay Tareenadu Catania
Qoraal ay wadaagaan E. Emancipato Sawir © (@ edoardo.emancipato)
Venice in Florence – 5 ugu Safarada tareen dalkinii Italy
Baro labo ka mid ah magaalooyinka caanka Italy ayaa kula safar tareen qurux badan in-u dhexeeya. The safar ka Venice si ay u Florence waxaad qaadataa weheliyaan muuqaal neefta-qaadashada iyo soo jiidasho magaalooyinka. safarka waa muddo dheer laba saacadood oo kaliya laakiin waa sida runta ah waayo-aragnimo kobcin. Ma jiro hab ka fiican inay u safraan u dhexeeya labada magaalo.
Milan ilaa Bolzano waa xulashadeena ugu dambeysa 5 Safarada tareen dalkinii Italy
La kulmaan geeyo la yaab leh tareen ka Milan si Bolzano. aad Qaadashada caasimada fashion dunida si buuraha dhagax weyn qar iyo riwaayado uu ka samaysan yahay Alps Talyaaniga. Eeg magaalooyinka jir Italy ee, baadiyaha weyn oo buuraha ugu quruxda badan iyo sawiro in Europe. Gelida Bolzano waa sida tagay Italy iyo galaya Germany, magaaladan yar waa Jarmal muuqaalka sababtoo ah waxa ay qayb ka ahayd Austria ka hor Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. muuqaal dabiici ah Tani safarka tareenka waa sixir!
Trento in Tareenadu Bolzano
Milan in ay Tareenadu Bolzano
Bologna si ay Tareenadu Bolzano
Venice in Tareenadu Bolzano
Fikirka qaadashada tareen si aad magaalada ugu cadcad Yurub? Tag website-kayaga Saveatrain.com si aad u hubiso soo baxay oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / es ama / luqadaha it / NL iyo ka badan.
#safarka tareenka #muuqaal dabiici ah #muuqaalka muuqaalka longtrainjourneys tareen safarka Views